VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ | FLEGT
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) သည် EU နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံ တို့၏ ကတိကဝတ်များကိုဖော်ပြသည်။ VPA တစ်ခုစီတွင် အပိုင်း ၂ ပိုင်းပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့မှာ အဓိက စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများဖြစ်ကြသည်။ VPA ၏ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်သည် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုစီတွင် ပါဝင်မည့် သတင်းအချက်အလက်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
VPA အဓိကစာသားသည် ပါဝင်သည့်အဖွဲ့တိုင်း၏ အဓိကတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်သဘောတူညီချက် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အချင်းချင်းမည်သို့အပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည်ကို ရှင်းပြထား သည်။ စာသားသည်ပုံမှန် အားဖြင့် ၁၅ မျက်နှာခန့်ရှိပြီး VPAs များအကြား အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိသည်။ စာသားတွင် အပိုဒ်ခွဲ ၃ဝ ခန့်ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်အနေဖြင့်
သဘောတူညီချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အတိုင်းအတာ
ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီကဲ့သို့ တည်ဆောက်ပုံများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ
သဘောတူညီချက်၏ မတူညီသောရှုထောင့်များ နောက်ကွယ်မှ အခြေခံသဘောတရားများ
သဘောတူညီချက်စတင်အာဏာသက်ရောက်ခြင်းနှင့် ပါ၀င်သည့်အဖွဲ့များမှ ပြင်ဆင်ခွင့်၊ ဆိုင်းငံ့ခွင့်၊ ထပ်တိုးခွင့်နှင့် အဆုံးသတ်ခွင့်များအတွက် စည်းကမ်းချက်များ
အချို့အပိုဒ်ခွဲများသည် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့် VPA နောက်ဆက်တွဲများအား စာချုပ်ပါအချက်များအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်တွဲများသည် VPA တွင်ပါသည့် အဓိကကတိကဝတ်ပြုမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အတွက် လက်တွေ့ကျသောအဆင့်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲများတွင် နိုင်ငံအလိုက် သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
VPA အရ မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်မည့် ဥပဒေများ
စာချုပ်နှင့် အကျုံးဝင်သည့် ထုတ်ကုန်များ
တရား၀င်ဖြစ်မှုကို ဆန်းစစ်ခြင်း၊ သစ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် အသုံးပြုမည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စနစ်များ
VPA အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါ၀င်မည့် အစိုးရ ဌာနများ၊ အေဂျင်စီများနှင့် ၎င်းတို့၏ တာ၀န်များ
သတင်းအချက်အလက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို လူထုအား အသိပေးခြင်းနှင့် မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်မည်ဆိုသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ
နောက်ဆက်တွဲအရေအတွက်မှာ VPAs များအကြားကွဲပြားပါသည်။ VPAs အများစုတွင်အောက်ပါ နောက်ဆက် တွဲများပါလေ့ရှိသည်။
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲ
FLEGT လိုင်စင်ရရှိထားသည့် သစ်ထုတ်ကုန်များတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ EU လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲ
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် အကဲဖြတ်ခြင်း စံများနှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲ
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့်နောက်ဆက်တွဲ
တွဲဖက်ပါဝင်သော အစီအမံများနှင့် ပတ်သက်သည့်နောက်ဆက်တွဲ
တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နောက်ဆက်တွဲများ
VPAs အားလုံးတွင် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်သည့်နောက်ဆက်တွဲ တစ်ခုပါရှိသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းနောက်ဆက်တွဲသည် စနစ်၏သစ်ခြေရာခံခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း ရှုထောင့် များအပေါ်အာရုံစိုက်လေ့ရှိပါသည်။ ယနေ့အထိ VPAs အများစုတွင် တရားဝင် သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် ၏ တရားဝင်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုကဲ့သို့သော အခြားအခြေခံ ကျသည့် အစိတ်အပိုင်းများ နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် အခြား နောက်ဆက်တွဲ များ တွင်ပါလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် လိုင်ဘေးရီးယားတွင်မူ တရားဝင်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု၊ သစ်ခြေရာခံခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့သည် နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုတည်းတွင် ထည့်သွင်း ထားသည်။
ဇယား ၁ တွင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ခုစီ၏ VPA များတွင်ပါ၀င်သည့် အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အပိုဒ်ခွဲများနှင့် နောက်ဆက်တွဲများကို ဖော်ပြထားသည်။
ဇယား ၁ အဓိကခေါင်းစဉ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ VPA များတွင်ပါဝင်သည့် အပိုဒ်ခွဲများနှင့် နောက်ဆက်တွဲများကို ဖော်ပြထားသည်။
ဗဟို အာဖရိက သမ္မတနိုင်ငံ
နောက်ဆက်တွဲ ၁ နောက်ဆက်တွဲ ၁ နောက်ဆက်တွဲ ၁ နောက်ဆက်တွဲ ၁ နောက်ဆက်တွဲ ၁
တရားဝင်ဖြစ် ကြောင်းအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်
နောက်ဆက်တွဲ ၂ နောက်ဆက်တွဲ ၂ နောက်ဆက်တွဲ ၂ နောက်ဆက်တွဲ ၂ နောက်ဆက်တွဲ ၂
တရားဝင်သစ် ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့် စနစ်ခြေရာခံခြင်းနှင့် ထိန်းအုပ်ခြင်း
တရားဝင်ဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ် အကဲဖြတ်ခြင်းစံများ
အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်မှု
* နောက်ဆက်တွဲအနေနှင့် မသတ်မှတ်သော်လည်း ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်အနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ဆောင်သည်
Cameroon-EU VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ [ PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Central African Republic-EU VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ [ PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Ghana-EU VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ [ PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Indonesia-EU VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ [ PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Liberia-EU VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ
[ PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Republic of the Congo-EU VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ
[PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်] Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Improving Forest Governance. A Comparison of FLEGT VPAs and Their Impact. FERN. 50pp. [Download ဒေါင်းလုပ်ရန်]